Amasevisi Ezokuthutha ibhizinisi international: Lesitshalo
Izinkampani wahlanganyela zokuthutha wezimpahla, ungakwazi ukuthutha imithwalo ngaphakathi esifundeni sabo kanye nakwamanye amadolobha. izinkampani ezinkulu wahlanganyela ezokuthutha international, inomusa nzima kwemisebenzi yezokuthutha, okudinga umthwalo omkhulu izindleko sina.
Izinkampani nokunikeza izinsizakalo zokuthutha i-international ibhizinisi sipho, njengoba umthetho, anhlobonhlobo amasevisi, lapho "wonke okufakayo". zokuthutha International kuyingxenye ebalulekile amabhizinisi amaningi, njengoba amafemu emikhulu ukusebenza ngokujwayelekile lihlobene eduze ukungenisa kanye ukuthekelisa kwemikhiqizo. Izinkampani ezisebenza emakethe ezokuthutha international, umthwalo wemfanelo ngokugcwele ezihlobene izimoto zabo, ngoba, kwenzekani ibanga elide ukuya ibanga elide, hhayi zephuke izimoto kufanele ibe sesimweni esiphelele. Kufanele kuqashelwe ukuthi kwamanye amazwe izimfuneko ezingokomthetho isimo lobuchwepheshe izimoto ukuba ezibonakalayo sihluke kwezinkambiso wezwe lakithi. Vele ziyahlukahluka izidingo kumadokhumenti somshayeli kanye wezimpahla imvume.
Amakhasimende ezinkampani ezokuthutha ngokuvamile namafemu, izitshalo, izinkampani yezimboni eyahlukene noma abaxhumanisi yabo. Ngokuhamba kwesikhathi, inkampani esingadala ubambiswano unomphela, kanye nemizila okwenziwa nemininingwane emincane.
Ezokuthutha is akhethiwe kuye ngohlobo wezimpahla, amabanga abathintekayo futhi lula ukulethwa. Cabanga zonke izinhlobonhlobo kungenzeka yezokuthutha.
- Uhlobo lokuqala - a ukulethwa kwezimpahla ngesitimela - abiza ngempumelelo futhi elula. Nezinqola ezimboziwe ezisekelweni zingasuswa kokubili imithwalo ezincane nezinkulu, kodwa emathangini akhethekile amafriji unekhono ukuthutha izinto eziwuketshezi imikhiqizo ezidinga izimo isitoreji ekhethekile.
- ezokuthutha Road uyohlale efanele, ngisho oluya kude uhambo. Ku-traffic ngamazwe ngokuvamile zisebenzisa ezimotweni futhi trailer ukuthi afeze ukulethwa "endlini ngendlu."
- ezokuthutha Water Uphinde abhekwe ngendlela ezuzisa kwezomnotho ukuthuthela izimpahla. Uma izimpahla akuzona eziyingozi futhi akuzona ezigugayo, futhi akudingi ukulethwa kahle ekhethekile, indlela engcono kakhulu yezokuthutha - amanzi ezokuthutha.
- Sebenzisa ezokuthutha emoyeni isivinini wezimpahla ukulethwa kuqinisekisiwe. Kuyinto ngendlela eyiyo ukuthutha, okuyinto engcono kakhulu ukuthutha izimpahla iyashabalala futhi ephezulu value. Imali yokugibela yezindiza zinezikhathi eqolo, ngakho amasevisi air zokuthutha asetshenziswa ngokuvamile lapho isidingo ukulethwa esiphuthumayo.
Ngenxa umkhakha ngokushesha socwaningo kanye inzuzo enkulu, nezokuthutha e ezokuthutha international uyohlale kube lusizo futhi ziphoqa kunoma yiliphi izwe emhlabeni.
Ukwakhiwa ukugeza imoto. Kanjani ukuqala ibhizinisi?
Izinhlobo ngokusungula indlela yokubulala izinzwa amazinyo: incazelo zinhlobo
Ukwahlukanisa nezinhlobo lezihlalo ingane
Amathiphu ambalwa sendlela ukuqeda onukayo
VECO Izinsiza kusebenza Umkhiqizi (ezweni)
Ososayensi baye "izakhi" indoda angakwazi ukuphila engozini yemoto